Hazo voatanisa | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra
Karazan-kazo fanamboarana. Noho ny refy voamarina sy ny lalantsara mampifandray manokana (ny masinina dia milina amin'ny alàlan'ny milina fanodinana efatra), dia nivory haingana sy nivory haingana izy.
Hazo voatanisa - sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy mitaky fanampiny ivelany, ary amin'ny ankabeazan'ny tranga, ny haingon-trano anatiny. Araka ny ambaratongam-fikirakirana hazo dia azo avahana ireo vondrona hazo hazo misy profiled telo, izay mety tsy hitovy amin'ny mombamomba azy sy ny habeny. Endri-javatra sasantsasany amin'ny vondrona tsirairay.
Hazo mamy voajanahary voajanahary
Vita amin'ny hazo miolakolaka misy hamandoana voajanahary izy io. Ny malaza indrindra noho ny vidiny ambany. Mora ny mivory. Mitaky fanodinana kitay fanampiny amin'ny bibikely sy ny bibikely.
Mihena ny trano. Mety hipoaka ny triatra, izay fanao mahazatra amin'ny hazo fananganana hamandoana voajanahary. Ny triatra dia azo tsaboina (sarony) miaraka amina putty manokana ho an'ny hazo, na azonao avela toy ny amin'ny trano tena izy ireo.
Hazo maina maina
Vita amin'ny hazo tapa-kazo izy io, izay manaraka fitsaboana hafanana ao amin'ny efitrano maina. Mandritra ny fizotran'ny fanamainana dia mety miforona ny triatra, izay toetra iray amin'ny fitondran-kazo hazo iharan'ny fitsaboana hafanana, mifandraika amin'ny natioran'ny hazo.
Hazo maina voamarina - mora vidy, sariaka amin'ny tontolo iainana, mora apetraka. Ny trano vita amin'ny fitaovana toy izany dia vonona handray ny tompony amin'ny andro voalohany aorian'ny fahavitan'ny fanamboarana.
Mazava ho azy fa tsy misy fihenam-bidy. Mety misy fiovana kely eo amin'ny habe noho ny toetr'andro na fizaran-taona (izany no fanao amin'ny hazo fanorenana maina).
Mitaky ny vidin'ny fanodinana ambany kokoa noho ny bibikely sy ny bibikely ala noho ny hazo hamandoana voajanahary.
Hazo voafetaka nopetahana
Vita tamin'ny hazo maina. Ahitana fizarana (takelaka) misaraka izay azo afatotra (voaravaka) na amin'ny sakany na amin'ny haavony, miankina amin'ny tanjona sy ny halavany
Ny tombony amin'ny hazo laminated veneer dia ny habeny. Ny halavan'ny fitaovana - hatramin'ny 12 m na mihoatra, ny sakany sy ny haavony dia mety miovaova. Tsy vaky.
Ny fisehoan'ny rindrina vita amin'ny bara toy izany dia mitazona ny estetika rehetra amin'ny trano hazo mahazatra. Amin'ireo lesoka, ny vidiny ihany no azo marihina (ny vidin'ny hazo mihidy dia somary avo kokoa noho ny mahazatra azy), ankoatr'izay, misy akora simika (lakaoly) amin'ny firafitry ny hazo.
Ireo karazan-kazo lehibe
Hazo tsy tapaka na tapa-kitay hazo: inona no tsara kokoa hisafidy?
Trano hazo mitsangana norveziana
Hazo roa sosona: fananganana trano amin'ny fampiasana teknolojia Finnish
58 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,643.